ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Mumps vaccine)သည် ဂျိုက်သိုးရောဂါကို စိတ်ချစွာကာကွယ်နိုင်သော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ လူအများစုကို ဤကာကွယ်ဆေးပေးပါက ထိုလူထုထဲတွင် ဂျိုက်သိုးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ လူပေါင်း(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဤကာကွယ်ဆေးပေးပါက (၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အချိန်ကြာရှည်စွာ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန် နှစ်ကြိမ်ထိုးပေးရသည်။ ပထမအကြိမ်ကို ကလေးအသက်(၁၂-၁၈)လအတွင်းတွင် ပေးရပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်(၂-၆) နှစ်အတွင်းတွင် ပေးရသည်။ ခုခံအားအပြည့်အဝမရသေးသူများသည် ဂျိုက်သိုးရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိပါက ဤကာကွယ်ဆေးကို ထိုးထားသင့်သည်။
ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် အလွန်စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်ပြီး ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် အနည်းငယ်နာကျဉ်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်းစသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်တတ်သည်။ ပို၍သိသာထင်ရှားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကြောင့် အာရုံကြောနှင့်ဆိုင်သော ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်ဆိုသည့်အယူအဆမှာ လုံလောက်သော သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများကို ဤကာကွယ်ဆေး ပေးရန်မသင့်ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးအထိုးခံခဲ့ရသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများ၏ ကလေးများတွင် မကောင်းသောဆိုးကျိုးများဖြစ်တတ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း စာရွက်စာတမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း မတွေ့ရပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြက်ဥ၏ဆဲလ်တွင် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း ဥနှင့်မတည့်သောလူများကိုပါ စိတ်ချစွာ ပေးနိုင်သည်။
တိုးတက်နေသောနိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအများအပြားတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတို့နှင့် ရောစပ်ထားသော အမ်အမ်အာ(MMR)ဆေးအဖြစ်ဖြင့် ကာကွယ်ဆေးပေးခြင်းအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းထားကြသည်။ အထက်ပါ(၃)မျိုးအပြင် ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုပါ ရောစပ်၍ အမ်အမ်အာဗွီ(MMRV)ဆေးအနေဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်ပြီး (၂၀ဝ၅)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း(၁၁၀)တွင် ၎င်းဆေးကို ပေးကြသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထိုးပေးသောနေရာများတွင် ဂျိုက်သိုးရောဂါဖြစ်ပွားမှု (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လူပေါင်း သန်း(၅၀ဝ)ခန့်ကို ဤကာကွယ်ဆေးပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၄၈)ခုနှစ်တွင် စတင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းမှာ အချိန်တိုအတွင်းသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ (၁၉၆၀)နှစ်ပိုင်းအတွင်းတွင် ပို၍ကောင်းသောဆေးများ ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးများမှာ အသက်မရှိတော့သော ရောဂါပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး နောက်ပိုင်းပြုလုပ်သောဆေးများမှာ အသက်ရှိသော်လည်း အားပျော့သည့်ရောဂါပိုး ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို (၂၀ဝ၇)ခုနှစ်တွင် အမျိုးပေါင်းများစွာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် အမ်အမ်အာဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (ဝ.၂၄) ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၉ "Mumps virus vaccines." (16 Feb 2007). Weekly epidemiological record 82 (7): 49–60. PMID 17304707.
↑ Hviid A, Rubin S, Mühlemann K (March 2008). "Mumps". The Lancet 371 (9616): 932–44. doi:10.1016/S0140-6736(08)60419-5. PMID 18342688.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ Atkinson၊ William (May 2012)။ Mumps Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (12 ed.)။ Public Health Foundation။ pp. Chapter 14။ ISBN 9780983263135။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=341785" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။